एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग - सारा खबर
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुई/दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टीमा छलफल नै नगरी दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।
‘पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा दुई÷दुईपटक विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै पुनस्थापना गर्‍यो । के संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? असंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रा अध्यक्षज्यू कतिपटक उठबस गर्नुपर्छ ?’ बैठकमा तेस्रो धारका एक नेताले प्रश्न गरेका थिए ।
अघिल्लो लेखमागैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा कुल आचार्यको उम्मेदवारी, आइएलओ घोटाला छानवीन गर्ने उद्घोष
अर्को लेखमादशैंमा चलचित्र घर खुल्ने